Sida lagu ogaado caanaha caruurta ee been abuurka ah - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Zeng
Image caption Waalidka Yiyi oo 11 sano jir ah waxay ka walaacsan yihiin waxyaabaha caruurta ee la been abuuray
"Waxaan aad uga cabsi qabaa waxyaabaha caruurta ee la been abuuray," ayey tiri Zeng oo gabadheeda ay 11-jir tahay.
Walwalkeeda wuxuu muujinayaa fadeexadda ballaaran ee aadanaha dhankiisa ka timaada ee caalamka oo dhan hadda ka jirta, waxaana la arkay alaabo been abuur ah oo laga faa'iday malaayiin dollar, suuq fiicanna yeeshay.
Image caption Dawada la been abuuray waxay geysan kartaa dhibaato xun.
Zeng iyo seygeeda Shi waxay deggan yihiin magaalada Jiaxing, halkaas oo ay ku nool yihiin 1.2 milyan oo qof, magaaladaasi kama foga Shanghai. Ayaga iyo waalidiinta kale ee cusub waxay ka baqayaan caanaha warshadeysan ee caruurta, ka dib markii sannadihii la soo dhaafay la arkay kuwo wasaqeysan.
Sannadkii 2008, qiyaastii 300,000 oo caruur ah ayaa xanuunsaday ka dib markii ay cabeen caano lagu daray Melamine, waxaana markaas ka dib bilowday cabsi ballaaran.
"Si buuxda uma aamini karo baqaarada, suuqyada waawayn ama xittaa internet-ka. Waan ogahay mararka qaar in dadka ay waxkasta u sameynayaan lacag darteed," ayey tiri Zeng.
Balse waxay ogaatay in blockchain loo adeegsan karo in lagu xaqiijiyo sax ahaanshaha caanaha iyo cuntada caruurta. Ayadoo adeegsaneysa telefoonkeeda oo lagu xiray qalab yar oo xaqiijinaya waxa ay alaabta tahay.
Image caption Zeng oo telkeeda u adeegsaneysa xaqiijinta caano ay soo iibsatay
Xarig yar ayaa lagu xirayaa gasaca ama daasadda caanaha caruurta, sida uu sheegay Alexander Busarov, madaxa fulinta shirkadda qalabka sameysay.
Qalabka wuxuu u shaqeynayaa sida anteeno si uu ugu xirmo wax yar oo lagu dhejiyo telefoonka nooca casriga ah. Wuxuu lambar cusub u sameynayaa alaabta lagu eegayo, xaqiijintana waxay qaadaneysaa illaa laba ilbiriqsi, sida uu tilmaamay Mr Busarov. Ka dib waxaad heleysaa natiijada oo faafaahsan, sawir iyo meesha alaabta lagu sameeyay.
Blockchain waa qaab wanaagsan oo lagu ogaado xitaa dawada, sida ay tilmaamtay Suzanne Somerville oo ka tirsan mashruuca MediLedger oo arrimaha shaybaarada ka shaqeeya.
Image caption 'Dheemanka dhiigga' waxaa ka faa'ida kooxaha hubeysan
Blockchain waxaa sidoo kale loo adeegsadaa ka hortagga kooxaha hubeysan ee Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika kuwaas oo dagaalka ku saleysan dheemanka sanadkastaa ka faa'ida $3m illaa $6m oo dollar, sida ay sheegtay shirkad fadhigeedu yahay Washington DC.
Sanadkii 2003-dii, Qaramada Midoobey ayaa sameysay hannaan ay 81 dal uga hortagi karaan "dheemanka cas" ee dhaqaalaha ay ka helaan kooxaha hubeysan.
12 Luulyo 2017
Maqal Dhageyso: Masiixiyiinta caba caanaha geela